တရားမျှတသော ရွေးကောက်ပွဲ ကို အလိုရှိနေကြတဲ့ မလေးပြည်သူလူထု | AAR - သတင်းနှင့် ပြန်ကြားရေးဌာန
← မလေးရှား အစိုးရ၏ အဆင့် (၆) ဆင့် စီမံကိန်းတွင် ဒုက္ခသည်များ ပါဝင်ရန် မလို	မလေးရှား အစိုးရက တရားမဝင် အလုပ်သမားများကို မှတ်ပုံတင်ခွင့် ပြုမယ့် အစီစဉ် ရွှေ့ဆိုင်း →	တရားမျှတသော ရွေးကောက်ပွဲ ကို အလိုရှိနေကြတဲ့ မလေးပြည်သူလူထု	Jul 9
ဇူလိုင် ၉ ရက်နေ့ ကွာလမ်လာပူမြို့ ကိုတာရာယာ ကားဂိတ်အနီး လူထုဆန္ဒပြပွဲ ( ဓါတ်ပုံ- AAR )
လွတ်လပ်ပြီး တရားမျှတသော ရွေးကောက်ပွဲတစ်ခုကို ကျင်းပပြုလုပ်ပေးရန် တောင်းဆိုသည့် အနေဖြင့် မလေးရှားနိုင်ငံ ရှိ အတိုက်ခံပါတီခေါင်းဆောင် တစ်ဦးဖြစ်တဲ့ အဏ္ဏဝါ ကိုထောက်ခံတဲ့လူ များက ဦးဆောင်၍ လူထု ဆန္ဒ ပြ ပွဲ တစ်ခုကို ယနေ့ ဇူလိုင်-၉ရက်နေ့ နေ့လည် ၂ နာရီ မှ စ၍ ကွာလမ်လာပူ မြို့ရှိ အဓိက နေရာ ၃ နေရာတွင် လူထုဆန္ဒ ပြပွဲ ကို ဆင်နွဲ သွားကြသည်။
ထောင်ပေါင်းများစွာသော ပြည်သူတွေဟာ လွတ်လပ်ပြီး တရားမျှတသော ရွေးကောက်ပွဲ တစ်ရပ်ပြုလုပ်ပေးရန် လက်ရှိဝန်ကြီးချုပ် နာဂျစ် အား အကြမ်းမဖက်ဘဲ ငြိမ်းချမ်းစွာဖြင့် ဆန္ဒပြ တောင်းဆိုနေကြစဉ် ကိုတာရာယာ ကားဂိတ် အနီးတွင် ငြိမ်းချမ်းစွာ ဆန္ဒပြ တောင်းဆိုနေကြသော မလေးရှားပြည်သူလူထုထံသို့ အာဏာပိုင်များက မျက်ရည်ယို ဗုံးများ နှင့် လည်းကောင်း မီးသတ်ပိုက်ကြီးများဖြင့် လည်းကောင်း ပြည်သူတွေကို အနာတရဖြစ်အောင် ပြုလုပ်သော်လည်း တစ်စုံတရာ ပြန်လည်တုန့်ပြန်ခြင်း မရှိပဲ ၎င်းတို့ရဲ့ လွတ်လပ်ပြီး တရားမျှတသော ရွေးကောက်ပွဲ ဖြစ်ပေါ်လာရေးကို ရှေ့ရှုပြီး ငြိမ်းချမ်းစွာနဲ့ပဲ ဆက်လက်၍ ဆန္ဒပြ သွားကြပါတယ်။
မိုးတွေ သည်းသည်းမည်းမည်း ရွာနေတဲ့အချိန် ဖြစ်ပေမယ့် မလေးရှားပြည်သူတွေ ဟာ စည်းစည်းရုံးရုံး ညီညီညွတ်ညွတ် နဲ့ မိုးရည်တွေကြား ထဲမှာ ၎င်းတို့ရဲ့ တောင်းဆိုမူ့ကို မလေးရှားအာဏာပိုင်တွေ ပိုပြီးသိလာအောင် လုပ်ဆောင် ပြလိုက်နိုင်တာဟာ ၎င်းတို့ရဲ့ အောင်ပွဲတစ်ခု ပင်ဖြစ်ပါတယ်။
ဒီလို တောင်းဆိုမူ့တွေ အပေါ် လက်ရှိ ဝန်ကြီးချုပ် ဖြစ်တဲ့ နာဂျစ် က ဘယ်လို ကိုင်တွယ် ဖြေရှင်း သွားမှာလဲ ဆိုတာ မလေးရှား ပြည်သူတွေရော မလေးရှားနိုင်ငံ ရောက် နိုင်ငံခြားသားများပါ စိတ်ဝင်တစား စောင့်ကြည့် နေကြပါတယ်။
Posted on July 9, 2011, in သတင်းကဏ္ဍ. Bookmark the permalink.	Leaveacomment.	← မလေးရှား အစိုးရ၏ အဆင့် (၆) ဆင့် စီမံကိန်းတွင် ဒုက္ခသည်များ ပါဝင်ရန် မလို	မလေးရှား အစိုးရက တရားမဝင် အလုပ်သမားများကို မှတ်ပုံတင်ခွင့် ပြုမယ့် အစီစဉ် ရွှေ့ဆိုင်း →	Leaveacomment